10 warbaxin ku saabsan Faa’ida Dhididka Arimaha Bulshada | Somali music, lyrics, songs, mp3 Warwad
10 warbaxin ku saabsan Faa’ida Dhididka
Waa dhag dhag, waa qoyaan, xiliyada kuleelka waxaan nacnaa meelaha bulshada inaan ku agmarno , intaas waa dhibaatada dhididka, hase yeeshee intaas faa’ido ka wayn ayuu leeyahay.
Waxaan jecelnahay inaan maqaalka ku keexno..
1. Ragga waxay ku dhawaad maqaarkooda ku looyahiin 2.5 Million oo tubada qaada dhididka, halka dumarkana ka leeyihiin 1.8 Million.
hase yeeshee aadanaha halka oo intaasi ka leeyahay, ayaa ayga tusaal ahaan lahayn waana mid lagu garto marka oo kuleel dareemo si jirka u qaboojiyo waxoo adeegsadaa carabkiisa, waana qaabka oo booska dhididka u isticmaalo, waana sida ugu sahlan lagu karo karo maadaama oo qeeb wayn ku leeyahay qaboojinta jirkeena, haddii kale sidii bir oo kale ukulalaal lahayn.
2. Tubada qaada Dhididka ee heesa hoosha ugu wayn, xiliga dhididka waxay sameeneesaa biyo aad uqfiififa oona hawada ku qalalaayo, waxayna sababaayaan maqaarka oo ah orgaanka jirkeena ugu wayn inuu qaboobo, sidaas aan ku dareeno qabow.
3.Dhididka waxa oo ka sameesan yahay 98-99% biyo, kuna jiraan waxyaabo yar yar cusbo, kalium iyo Mineralstoff, sidaas awgeed hadii dhididkaagu bato waa inaad cabto biyo ka badan inta aad cabi jirtay, si aad ubuuxiso booska biyo kaa baxay, qofka cakiiska sameeyo aynan biyo cabin kalyia ma’ahan qalad ee waa halis kuu sababi karta, inay maskaxdaada si fiican ushaqeenin, xataa aad ku sababi halis aa uwayn ee nolashaada.
4. Dadka da’da ah Way dhidid yaryihiin, taasina waxaa keeneeso maadaama ay weenaadeed tubooyiinka u qaada dhidika ayaa daciifaayo, adkeesikooda way ku adkaaneesaa, sidaas awgeed barfasoorada waxay kula talaiyaan in biyo badan cabaan, sidoo kale qudaarta badsadaan, sida qajaarka iyo qaraha.
5. Waxaa jiro labo nuuc tubooyinka dhididka ukala qeebsamaaan, (EKKRINEN) qaar waxay ku yalaan dhamaan jirka si u habeeyeen xaraarada jirka oo ku suganyahay, halka kuwa kale (APOKRINEN), ay ku yaalaan kaliya Kilkikisha, naasaha hoostoda, xubnaha taranka agagaarkooda, kuwaana waxay sameesmaa xiliga qaan gaarka waxay ku xeranyihiin dareenkeena iyo inaan kacsi gaar nahay.
6. Midka EKKRINEN la dhaho waa mid aanan lahayn wax ur ah eena ah nadiiif ah biyo cad ah, halka kan kale ee APOKRINEN la dhaho oo u egyahay sida caanaha oo kale, lehna Udgoon uqaas ah, oona ka hadlaayo inaan diyaar unahay dareen, sida kale hadaan ufasirno, haduusan nididkaa jirin wax galmo maan sameeneen waana xubin aad ugu muhiim ah.
7. Haddii dhididka badanyihiin yahay mid aanan ur lahayn, maxay dharkeenu ushiiraan, waa suaal aad uwanaagsan oo is weediin mudan, jawaabta waxay tahay dhididka jirkeena wax danbi ah kuma lahan, kaliya marka ay imaadaan dharka bakteeriyaasha oo wato ayaa ah kuwa shiira, kuwaasoo inaga yimaado, oomada kiiimakadeeda aan ku dhaqno dharka ayaga ayaa sameenaayo marka dhididka la kulmo waana sababta oo ushiiro, kiimkada ku dhaqano dharka oo dhaliya.
8. Dhididka ma ahan kan naga jiro kiilada, sida dadka qaar moodo oo miisaan ku istaaagaa marka ay is dhidid iska keenaa, waxa aad dareemmeeso waa biyo ka baxay jirkaada kaliya, dadka way kala duwanyihiin dad waa dhidid badanyihiin, halka dadka qaar ka dhidid yaryihiin.
9. waxaa jiro cududro la daris ah dhididka sida (Hyperhidrose) kaas oo dhidid aad ubadan kalifo ama “Ross-Syndrom” kaa oo yareeya sidoo kale iyo kuwa kal.
10. Warbaxinta xun dhididka leeyahay, waxa waayo waxa oo kalifaa in tinta kaa jajajabto, maadaama biyo iyo cusbada ay gaarayaan tinta, sidaas awgeed marka aad udhidado waxaa haboon inaad ka qabeesato. warbaxinta fiican waxaase tahay maqaarkaaga midibkiisa ayaad uqurxoonaanaa dhididka marka aaad sameeso maqaarka meelaha xerxermay oo ka neefsado idil ayaa furmaayaan taasina aad ayee ugu fiicantahay maqaarkeena, sido kale waxay wadataa maadada la dhaho Lipide oo ka dhigaayo jirkeena liisha oona ah cream dabiici waliba jirka dhan u qeebinaayo…